बुवालाई के भन्ने ? मोटरसाइकल पछाडी राखिएकी यी बालिकाः बाबुको असंवेदनशीलताको हद छैन र? – Tufan Media News
बुवालाई के भन्ने ? मोटरसाइकल पछाडी राखिएकी यी बालिकाः बाबुको असंवेदनशीलताको हद छैन र?
काडमाडौं, पुस २३ । यो तस्वीर देख्दा तपाईंलाई कस्तो लाग्यो ? बालबालिकाप्रति अभिभावकहरु कतिसम्म लापरवाह हुन्छन् भन्ने एउटा उदाहरण हो यो ।
सम्पादकीय नोटः हामीले यो तस्वीर राखेर आममानिसलाई सूचित के गर्न खोजेका हौं भने, के हामी हाम्रा साना साना नानीहरुप्रति सचेत छौं ? सडक दुर्घटनाबाट सुरक्षित हुन हामी आफै कत्तिको सचेत छौं ? भन्न यो तस्वीर सहायक होला भन्ने हामीले ठानेका हौं ।